5:44 AM ဝင်းကမ္ဘာကျော် (နည်းပညာမှတ်တမ်း) No comments
NoBloat (Android ဖုန်းတွေထဲက မလိုအပ်တဲ့ System App တွေ ဖျက်ချင်ရင်)
အဆင့်မြင့် Photoshop မှတ်စုများ (မြန်မာလို စာအုပ်)
HWH ဥုံ Android Version Update နှင့် Windows Computer Version များရယူနိုင်ပါပြီ (Updated 19 July 2013 Martyr's day)
စက်ရဲ့ Mouse Cursor တွေကို စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲပေးနိုင်မယ့် CursorFX v2.11 For Win XP & Win7
FIFA 13 version 1.0.9 for iPhone, iPad, iPod Touch
Posted: 21 Jul 2013 09:06 AM PDT
ဖုန်းထဲမှာ မူလကတည်းကပါရှိတဲ့ ဖျက်မရ ရွှေ့မရတဲ့ App တွေကို ဖျက်ပေးနိုင်တဲ့ Software လေးပါ...။ Root လုပ်ထားတဲ့ Devices တွေမှာသာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဖျက်မရ ရွှေ့မရတဲ့ System App တွေကို ဒီ NoBloat နဲ့ ဖျက်ပစ်နိုင်သလို Disabling and Enabling လုပ်နိုင်ပါတယ်...။
ပြီးတော့ ဘယ် System App ကို ဖျက်ဖျက် မဖျက်ခင်မှာ SD Card ထဲကို Backup လုပ်ပေးထားပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် မှားဖျက်မိခဲ့ရင်တောင် အလွယ်တကူ ပြန်ပြီး Restore လုပ်နိုင်မှာပါ။ Android 2.2 နှင့်အထက် ဖုန်းများမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Posted: 21 Jul 2013 04:31 AM PDT
PhotoShop လေ့လာနေသူများအတွက်ဒီစာအုပ်မှာ သင်ခန်းစာတွေကလည်း အတော်ကိုမြင့်တယ်၊ အခန်းပေါင်းလည်း အမျာကြီးပါဝင်တယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကကို 21MB ရှိတယ်။ အခန်းကြီး ၅ ခန်းကိုမှ အခွဲပေါင်းများစွာနဲ့ သင်ပြထားပါတယ်။ Photoshop ၀ါသနာရှင်များ Download ရယူနိုင်ကြပါပြီ
မိတ်ဆွေများခင်ဗျာ.. ကျွန်တော် ဒီရက်ပိုင်း ခရီးခဏခဏထွက်နေရတာက တစ်မျိုး၊ ပြန်ရောက်ပြန်တော့လည်း ကျွန်တော်သုံးတဲ့ ADSL လိုင်က ခဏခဏပြတ်၊ လိုင်းကောင်းတော့ မီးပြတ်. ဒီလိုနဲ့ ပို့စ်မတင်ဖြစ်တာ. ၂ ရက် ၃ ရက်လောက်ရှိသွားပါပြီ..
မနေ့က HWH (ဥုံ) Android Version Update နဲ့ Windows Computer Version ထွက်တာတောင် တင်ပေးမလို့ မတင်လိုက်နိုင်ပါဘူး.. မနေ့က လုံးဝ သုံးမရလို့ပါ.. ကျွန်တော့်တို့ရဲ့ Android Device တွေမှာ HWH(ဥုံ) Application လေး တွေအသုံးပြုနေကြတာကိုတွေ့ရမှာပါ.. လူသုံးအများဆုံး NEWS update Application လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်.. ဒါကြောင့် ဗားရှင်း အသစ်တွေကို ရယူနိုင်ဖို့ Admin ရဲ့ ပို့စ်တစ်ခုလုံးကို မူရင်းအတိုင်း ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်..
HWH ဥုံ ဘာလဲဆိုတာတော့ အကျယ်တ၀င့် မရှင်းတော့ပါဘူး။ အင်တာနက် ၁၅မိနစ်ရှိရုံနဲ့ စက္ကန့်တိုင်း၊ မိနစ်တိုင်း ပြောင်းလဲနေတဲ့ အင်တာနက်ပေါ်မှာ စီးဆင်းနေတဲ့ သတင်း၊ သုတ၊ ရသ၊ နည်းပညာ၊ အားကစား၊ စသဖြင့် ကဏ္ဍမျိုးစုံကို ဖတ်ရူနိုင့်မယ့် Offline News Readerလေးပါ။ ယခု Android Versionသစ်မှာတော့ RFA, BBC, VOA, NHK နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် များကိုပါ Onlineဖြင့် တိုက်ရိုက် နားဆင်နိုင်ပါတော့မယ်။ Windows Computer Versionကတော့ The First Myanmar Offline News Reader လို့ထင်ပါတယ်။ ပထမဆုံး Versionဖြစ်တဲ့ အပြင် ကျွန်ုပ်သည်လည်း Developer/Programmerကြီး တစ်ယောက်မဟုတ်လို့ အားနည်းချက် များစွာရှိနိုင်ပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ အင်တာနက်ပေါ်က အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ Frameကို ယူသုံးထားလို့ အဆင်ပြေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
***အထူးအသိပေးလိုသည်မှာ Downloadဆွဲ ရယူပြီး rar ဖိုင်အား ဖွင့်ပြီးလျှင် Read Me First ဖိုင်အား ဦးစွာဖတ်ပေးပါရန်နှင့် Windows Computer Software Install မလုပ်မီ Read Me First စာအုပ်ပါ လမ်းညွှန်ချက် နံပါတ်များအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါက ပို၍ အဆင်ပြေစေမည်ဖြစ်သည်။***
Posted: 20 Jul 2013 08:22 PM PDT
ကိုယ့်စက်ရဲ့ Cursor အဟောင်းကြီးကို အသစ်လဲချင်သူတွေ အတွက်ပါ..
ပထမ C-pannel ထဲက ပြောင်းနည်းကို တင်ပေးဖူးပါတယ်..
အဲ့ဒါကနည်းနည်း အလုပ်ရှုပ်တာကြောင့် ဒီ Software ကိုတင်ပေးလိုက်တာပါ..
အသေးစိတ်ကို မူရင်းဆိုက်မှာလေ့လာနိုင်ပါတယ် .. >>HERE
အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Download ဆွဲလိုက်ပါ..
14 MB ကျော်ကျော်ပဲရှိပါတယ်..
Download From Mediafire >>>>DOWNLOAD
Download Form Zippyshare >>>>DOWNLOAD
Download From DatafileHost >>>DOWNLOAD
Post By: Einstein Kelvin
Posted: 20 Jul 2013 02:43 PM PDT
TrTech မှာ Free ဒေါင်းရမှာနော်
အလွန်စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့ connection နဲ့ တစ်ညလုံး နေ့ရောညပါ
ဝယ်တုန်းကလဲ တစ်ညလုံး iTunes နဲ့ဒေါင်းရတယ်